Baidu nandefa blockchain-monina tahiry sary sehatra - Blockchain News
Baidu nandefa blockchain-monina tahiry sary sehatra
Baidu, Shina aterineto fikarohana goavana, dia nandefa blockchain-monina tahiry sary fanompoana ao amin'ny sary dia asao mba hiarovana ny fananana ara-tsaina ao Shina, ho ampahany ao anatin'ny hanoto midadasika kokoa ho an'ny teknolojia blockchain fananganan'anaka.
ny fanompoana, antsoina hoe totem, izay efa tany an-tserasera Wednesday, mampiasa blockchain mba timestamp ny manaiky am-boalohany tsirairay sary avy amin'ny mpampiasa amin'ny anarana maha-tena sy ny fitehirizana ny antontan-kevitra mifandray amin'ny sary nozaraina tao amin'ny tambajotra.
Amin'ny Baidu ny efa misy fahafahana amin'ny aterineto sy ny antontan-kevitra fikikisana fahaizana artifisialy, Hoy ny sehatra amin'ny alalan'ny sary mampitaha izay niely noho ny aterineto miaraka amin'ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny traceable blockchain, dia ho afaka hanamarina ny fiampangana ny fananana ara-tsaina fandikan-dalàna.
Korea Atsimo mikasa fitsipika henjana ny cryptocurrencies
Ho Korea Atsimo .. ny.
Tale Jeneralin'ny ny London St ...
Previous Post:Latest Winklevoss rahalahy’ crypto patanty manarona ny fiarovana nomerika raharaham-barotra
Next Post:Hoy ny manam-pahaizana silamo dia mifanaraka tsara Bitcoin ambanin'ny lalàna Sharia